जसपामा रडाको मच्चिएपछि बाबुरामको पार्टीका यी नेताले १ अर्ब ३० करोडमा उद्योग खोले
२०७४ सालको निर्वाचनमा राइले नेपालगञ्ज क्षेत्र समेटिएको क्षेत्र नं. २ बाट चुनाव जितेका थिए । चुनाव जितेपछि राइ दुई पटक सहरी विकास मन्त्री भए ।
पुस २९, २०७८ ८:२५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्को अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच मनमुटाव भएपछि पूर्वमन्त्री मो. इस्तियाक राई बिजनेसमा लागेका छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद छल्न उनी साइड लागेका हुन् । नेपालगञ्जका चर्चित राजनीतिज्ञ राई केही समयका लागि राजनीतिबाट केही पर पुगेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा राइले नेपालगञ्ज क्षेत्र समेटिएको क्षेत्र नं. २ बाट चुनाव जितेका थिए । चुनाव जितेपछि राइ दुई पटक सहरी विकास मन्त्री भए ।
उनका दाजुभाइ पनि राजनीतिमा होमिएका छन्। जसपाका नेता राइ राजनीतिज्ञलाई थाती राखेर उद्योगीको रुपमा अघि बढेको छन् । राइ परिवारले बाँकेको बिर्तामा एक अर्ब ३० करोडको लगानीमा तीन वटा व्यवसाय (उद्योग) सुरु गरेका छ।
४० कठ्ठामा दाना मिल, ९० कठ्ठामा कुखुरा र ह्याचरी फार्म सञ्चालन अघि बढाइएको छ। राइका बुवाको नाम मो. इस्माइल राइन थियो। ठूलो किसान भएकाले उनलाई स्थानीयले किसान भन्थे। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा इस्माइलले कुनै बेला ७० विगाहमा आलु खेती गरेका थिए।
गाउँलेले बुवालाई किसान भन्ने गरेको स्मरण गर्दै पूर्वमन्त्री राइले बिर्तामा किसान फिड मिल प्रालि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। ६५ करोडमा सञ्चालन थालिएको किसान फिड मिल प्रालिको सोमबार उद्घाटन गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महेन्द्रराय यादवले दुई जना ग्राहकलाई दाना बेचेर उद्योगको उद्घाटन गरे। मन्त्री यादवले मो. इस्तियाक राइ राजनीतिमा जसरी उद्योगीमा पनि सफल हुने शुभकामना दिए।
उनले मासु, कुखुरा र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको बताउँदै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। किसान फिड मिलमा प्रतिघण्टा दश मेट्रिक टन दाना उत्पादन हुन्छ। नौ हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम बनाइएको छ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै लक्षित गरेर पूर्वमन्त्री राइले दाना उद्योग, कुखुरा फर्म सञ्चालनमा ल्याएका छन्। ह्याचरी सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। किसान फिडमा ब्रोइलरको लागि पेलेट दाना, लेयर्सका लागि मेस दाना, पशु आहार केटल दाना र माछाको लागि दाना उत्पादन हुने राइले जानकारी दिए।
राइ परिवारको उद्योग र फर्ममा दुई हजार मानिस जोडिएका छन्। किसान फिड मिल उद्घाटनमा जसपाका नेता रमेशकुमार यादव, प्रदेश सांसद कृष्णा केसी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगर, संविधान सभा सदस्य सन्ध्या देव, नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति किरण कोइराला, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, एसपीत्रय श्यामकृष्ण अधिकारी, अशोक बम र नरेन्द्र गिरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।